Tusiyaha Tusiyaha Qulqulka Lacagta ayaa kaa caawin doona inaad aragto halka lacagta Firfircoon ay aadi doonto | vfxAlert official blog
Tusmada Qulqulka Lacagta (MFI) - ikhtiyaarrada faaiido u leh lacagta firfircoon
Falanqaynta farsamada waxay sii ahaaneysaa xulasho la isku halleyn karo sida lacagta loogu sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah . Laakiin, dhab ahaantii, kaliya mugga suuqyada ayaa dhaqaajinaya qiimaha, kaliya ka dib markii ay suuqyadu furaan heshiisyada lagama maarmaanka ah, xeeladaha waxay bilaabaan inay shaqeeyaan. Tusiyaha Tusmada socodka socodka lacagta ayaa kaa caawin doona inaad aragto halka lacagta "firfircoon" ay aadi doonto.
Celcelis ahaan Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa (EMA) ee leh 10 iyo 30 xilli . Go'aamiso jihada isbeddelka muddada-gaaban iyo muddada-dhexe. Guri leh isbeddel sarreeya, waxaad u isticmaali kartaa kanaalka qiimaha, gudaha aad ku dhex ganacsan karto (ugu yaraan 10-15 dhibcood ballaaran). Burburka ayaa noqon doona calaamadda binary ee isbeddel cusub. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh !
EMA (30) waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin “Dheeraad Dhexdhexaad” Dhexdhexaad ah oo jihada isbeddelku go'aaminayo, EMA (10) waxay noqon doontaa «dhakhso» Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo calaamadda ugu horreysa ee furitaanka ikhtiyaarka .
Tusmada Qulqulka Lacagta (MFI) . Waxay muujineysaa dhaqdhaqaaqa isbeddelada mugga lacagta "firfircoon" ee suuqa - kororka "socodka lacagta" ee iibsadayaasha ama kuwa wax iibinaya waxay keeneysaa tilmaame, haddii dulsaarka furan uu yaraado, MFI wuu diidaa. Waxay u shaqeysaa sidii xaqiijinta ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo bilaash ah oo ka socota Celceliska Dhaqdhaqaaqa. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan tilmaamaha barta .
WAC (UP) - ikhtiyaar . Celceliska Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa wuxuu ka gudbaa gaabiska MA salka hoose. MFI waxay ka soo baxdaa xad-dhaaf (ka sarreeya 20-ka heer) oo ay kor u kacdaa.
PUT (DOWN) - xulasho . Xaaladaha iska soo horjeedda: Celceliska Dhaqdhaqaaqa Dhaqsaha badan wuxuu ka gudbayaa gaabiska MA dusha sare ilaa hoos. MFI waxay ka soo baxdaa xaddi xad dhaaf ah (oo ka hooseeya heerarka 80) oo hoos ayey u dhaqaaqdaa.
Dhaqdhaqaaqa Heerka Lacagta Lacageed inta udhaxeysa heerarka 40 iyo 60 wuxuu xaqiijinayaa guri ku yaal suuqa. Waxaad ku furi kartaa ikhtiyaarka dib u soo celinta iyaga, adigoon sugin bixitaanka meelaha badan ee la iibsaday / la iibsaday. Qolka ganacsiga Forex forex, tan waxaa lagula talinayaa kaliya ganacsatada khibrada leh !
Waxaad si weyn u hagaajin kartaa natiijada istiraatiijiyadda haddii aad isticmaasho kombiyuutarada ganacsiga oo leh kormeerayaal badan. Tusaale ahaan, muddooyinka M5-M15 waxay bixin karaan calaamado qarsoon oo ku saabsan isbeddelka isbeddelka, kaas oo markaa lagu xaqiijiyo ganacsiga M1.
Haddii qiyaasta shilinta sare ay sii socoto muddo dheer, tilmaameha MFI wuxuu u eg yahay inuu "ku dhego" aagagga ba'an. Iska ilaali tilmaamayaasha kale iyo calaamadaha binary otomaatiga ah, waxaa laga yaabaa inay jiraan meelo wanaagsan oo laga soo galo muddadan.
Hantida leh isbeddel sarreysa, waxaa suurtagal ah in loo isticmaalo ikhtiyaarka istiraatiijiyadeed ee wax laga beddelay kaas oo celceliska celceliska sida qiimaha qiyaasta loo isticmaalo qiimaha HL / 2. Xeerarka furitaanka ikhtiyaarrada isma beddelaan. Farsamadan farsamooyinka ikhtiyaarrada ganacsi ee ka imanaya MFI waa daaheen, laakiin waxay kordhineysaa oo keliya kalsoonida irridda!
Soo Koobid ex Tusmada Qulqulka Lacagta waxay si sax ah u muujineysaa isbeddelka isku dheelitirka awoodda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha. Xitaa xaddiga shilinta ee suuqa Forex, tilmaamuhu wuxuu siinayaa waxyaabo badan oo guuleysta calaamadaha binary. Laakiin, waa wax aan macquul aheyn in go'aan lagu gaaro kaliya MFI. Waxaan u baahan nahay xaqiijin ka timid aaladaha isbeddelka iyo oscillators.